Mareykanka oo si adag uga hadlay xaaladda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo si adag uga hadlay xaaladda Soomaaliya
Dowladda Maraykanka ayaa ka hadasahay xaaladda Soomaaliya, waxa ayna sheegatay in aan la aqbali doonin doorashooyin is barbar socda iyo mid koox gooni ah u xiran.
WASHINGTON, USA - Richard Mills, oo ah sii-haayaha ergayga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Qaramada Midoobay oo ka hadlay fadhigii gaarka ahaa ee UN-ka ka yeeshay arrimaha Soomaaliya, ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga fogaado doorashooyin is barbar socda.
Richard Mills, ayaa si cad carrabka ugu dhuftay in doorasho hal dhinac ah, geedi-socod is-barbar-socda iyo qabashada doorasho kale oo ay kamid tahay yagleelida nidaam ku meelgaar ah ay sii hurin karaan xasilooni-daradda ka taagan Soomaaliya.
Diblumaasigaan wuxuu sheegay in loo baahan yahay ballan-qaad cusub oo u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka si ay u wada shaqeeyaan, loona helo heshiis wax looga qabto howlaha badan ee hor u socda ku hor gudban.
Mills wuxuu xusay muhiimadda ay leedahay in la helo jadwal cad oo lagu xalinayo xiisadda siyaasadeed ee halista ku ah mustaqbalka Soomaaliya.
Sidoo kale danjire Richard Mills ayaa sheegay in Mareeykanku taageerayo soojeedinta Guddiga Farsamo ee 16-kii Febraayo ku shiray caasimadda ku meelgaarka Jubaland ee Baydhabo, waxaana ay ku talisay in deg-deg loo bilaabo dhaqan-gelinta.